Suldaan Shariif “Dowladda Waxa ay dayacday Dadka kunool Goobaha ay Al-Shabaab kala wareegto”. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASuldaan Shariif “Dowladda Waxa ay dayacday Dadka kunool Goobaha ay Al-Shabaab kala wareegto”.
Suldaan Shariif “Dowladda Waxa ay dayacday Dadka kunool Goobaha ay Al-Shabaab kala wareegto”.
February 17, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Suldaan Shariif Cali Xasan oo kamid ahaa Odoyaasha dhaqanka wax kasoo dhisay Maamulka Koofur Galbeed oo la hadlay Warqaad.Com ayaa sheegay in Dhibaatooyin ay ka jiraan Deegaanada Ciidamada Dowladda ay kala wareegaan Al-Shabaab.
Suldaanka ayaa si gaar ah u sheegay in Ciidamada Dowladda marka ay la wareegaan Deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab, in dadka qaarkood aanan ula dhaqmin qaab aanan wanaagsaneen sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu soo hadal qaaday in deegaanada qaar ay Ciidamada Dowladda ay Telefoono u qoraan dadka shacabka si ay ugu wargeliyaan Xogta la xiriirta Al-Shabaab.
Goobahaas ayuu sheegay in waqti kooban kadib ay dib ugu soo baxaan, dadkaasina ay dhibaatooyin kale kala kulmaan Al-Shabaab, waxa uuna Sabab uga dhigay Telefoonada ay u qoraan Ciidamada.
Deegaano ay kamid yihiin Awdhiigle ayuu tilmaamay in ay ka dhaceen dhibaatooyinka uu sheegayo in ay sabab u yihiin yihiin Ciidamada Dowladda sida uu hadalka u dhigay.
Dhanka Madaxda Dowladda ayuu Suldaan Shariif Sheegay in ay adag tahay la kulankooda si ay ugu sheegaan dhibaatooyinka Deegaanada Koofur Galbeed ka jira.
Isaga iyo dhowr Oday Dhaqameed ayuu tibaaxay in ay isku dayeen in ay la kulmaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha balse aanan u suurta gelin, arrinta kahor istaagtay ayuu ku tilmaamay in ay tahay Shaqsiyaadka ka horeeya Madaxda Dowladda oo kahor istaagay sida uu hadalka u dhigay.
Waa uu sii hadlay waxa uuna Madaxda ka dalbaday in ay dajiyaan qorshe ka duwan Midka hadda Ciidamada Dowladda ku wajahayaan dadka kunool Deegaanada Al-Shabaab ay kala wareegaan, si uu sheegay in aanan dhibaato Shacabka soo gaarin.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda kama aanan warcelin Eedeemahaan ah in ay dhibaatooyin Ciidamada Dowladda ay u geystaan dadka kunool Deegaanada ay Maamulaan Xarakada Al-Shabaab.
Somali National Army carries out special operation in Kurtuwarey
Maxaabiis Soomaali ah, kuna Xiran Liibiya oo Maanta Muqdisho la keenayo.
41,712 total views, 2,465 views today
41,712 total views, 2,465 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
41,784 total views, 2,464 views today
41,784 total views, 2,464 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
41,796 total views, 2,464 views today
41,796 total views, 2,464 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
41,820 total views, 2,464 views today
41,820 total views, 2,464 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
41,848 total views, 2,461 views today
41,848 total views, 2,461 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]